အဖွင့် ဖိုရမ် သတင်းနှင့်အင်တာဗျူးများသတင်းများ ဒဏ်ရာသတင်းများ အင်တာဗျူးများ ဆောင်းပါးပွဲကြိုသုံးသပ်ချက် ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက် အထွေထွေဆောင်းပါး မှတ်တမ်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများ ဗီဒီယိုမှတ်တမ်း (ဟိုက်လိုက်) မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ ပွဲစဉ်များ ပထမအသင်းကစားသမားများ နည်းပြအဖွဲ့ဝင်များ အထွေထွေAM ခန့် မှန်းပြိုင်ပွဲ AM ခန့်မှန်း ပြိုင်ပွဲ ဇယား Fan Club ဆောင်းပါး
Instagram Takeover	#DanAba	ဇန်န၀ါရီ ၂၃ ရက်နေ့ မှာ အသင်းက ကစားသမားအချို့နဲ့ ပရိသတ်နဲ့ Online မှာ အမေးအဖြေ လုပ်တဲ့ အစီအစဉ် တခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအစီအစဉ်က အရင်တခေါက်ကလို Twitter မှာ လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ ပထမဆုံးအချိန်အဖြစ် Instagram မှာ ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေက Instagram မှာ စာမှတဆင့် ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ မေးခွန်းမေးပြီး အဆိုပါမေးခွန်းတွေကို ကစားသမားတွေက Video မှတဆင့် ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ထို Instagram Takeover မှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ အသင်းက ကစားအချို့ကတော့ Jack Wilshere, Chambers, Szczesny နဲ့ Ozil ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ကစားသမား ၄ ဦးရဲ့ အမေးအဖြေကို တစ်ဦးချင်းစီ အလိုက် ခွဲခြား တင်ပြလိုက် ပါတယ်။
အာဆင်နယ်ရောက် အမြင့်ပျံ ပိုလန်ကြယ်ပွင့် (သို့) ခရိုင်စတီရန် ဘီလစ်	~Gunner Saw~	၁၉၉၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၂ ရက်၊ ပိုလန်နိုင်ငံ ကိုနင်ဆိုတဲ့ မြို့လေးမှာ ခရိုင်စတီရန် ဘီလစ်ဆိုတဲ့ သူငယ်တစ်ဦး မွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆယ်နှစ်အကြာမှာတော့ အဲဒီသူငယ်ဟာ မြို့ခံဘောလုံးအသင်း ဂေါ့နစ်ကိုနင်မှာ ဘောလုံးသမားဘဝကို စတင်ခဲ့ပါတယ်။ ပိုလန်ထိပ်တန်းကလပ် လက်ခ်ျပေါ့ဇ်နန်အသင်းက ဘောလုံးကင်းထောက်တွေ မတွေ့မီ အထိပေါ့။
ကိုကွီလင်ဟာ အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်ခံစစ်အတွက် အဖြေလား	~mr.arzonal~	“ကျွန်တော်ကတော့ ကွင်းလယ်ဆိုတာ ကြံ့ခိုင်သန်စွမ်းတဲ့ ဧရိယာတစ်ခု ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်” လို့ ဆိုလိုက်သူက အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ဂန္တဝင်နောက်ခံလူ မာတင် ကီအွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ အသက် ၄၈ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ လက်ရှိဘောလုံးဝေဖန်သုံးသပ်သူအဖြစ် လုပ်ကိုင်နေသူ ကီအွန်က ဒီလို ဆက်ပြောပါတယ်။
“ဖရန်စစ် ကိုကွီလင် (Francis Coquelin )က အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အရင်က ထည့်စဉ်းစားမခံခဲ့ရတဲ့ ကစားသမားတစ်ယောက်က လုပ်ပြခွင့်ရတဲ့ချိန်မှာ သူလုပ်နိုင်တာတွေကို လုပ်ပြနေတာပါ။ ဂျက်နဲ့ အာရွန်တို့ကို လက်လွှတ်ထားရပေမယ့် သူ(ကိုကွီလင်)အားသန်တဲ့နေရာမှာ သူတို့လိုပဲ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ပြနေသူပါ” လို့ သူကပြောပါတယ်။
ဒါဆို ကိုကွီလင်ဟာ အာဆင်နယ်အသင်းရဲ့ ကွင်းလယ်ယိုယွင်းမှု ပြဿနာကို အဖြေရှာပေးနိုင်မယ့် ကွင်းလယ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်လို့ သတ်မှတ်လို့ရပြီလား။ ဒီမေးခွန်းကို ဖြေဖို့ စောနေပါသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်ကတော့ ဒီပြဿနာက အချိန်ဆွဲလို့ရတဲ့ ပြဿနာမဟုတ်တဲ့အတွက် ချက်ခြင်းဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။
Emirates Stadium သို့မဟုတ် အမြောက်တပ်သားများ၏ ခံတပ်	Gunner Panda	ဟေးဘရော့ ဖြစ်ရပ်ဆိုးအပြီးမှာ FA က အင်္ဂလန်ကလပ်များကို ၉၄-၉၅ ရာသီမစခင် သူတို့ အိမ်တွင်းတွေမှာ မတ်တတ်ရပ်ကြည့်စဉ်တွေအစား ထိုင်ခုံတွေ အားလုံးအပြီးတပ်ဆင်ရမယ်လို့ ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒီတော့ အာဆင်နယ် အသင်းဟာလည်း သူတို့ Highbury ကွင်းကို ပြန်ပြင်ခဲ့ရပြီး ရလဒ်အနေနဲ့ကတော့ ပရိသတ် ၅၇၀၀၀ ဝင်ဆံ့တဲ့ အခြေအနေကနေ ၃၈၀၀၀ ကျော်ပဲဆန့်တဲ့ ကွင်းဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ ပြင်ဆင်စရိတ်ကလည်း ပေါင် သန်း ၂၀ နီးပါးလောက်ထောင်းသွားပါတယ်။ ဒီတော့ စရိတ်ပြန်ရှာတဲ့ အနေနဲ့ လက်မှတ်ခတွေ တင်ပြန်တော့လည်း ဈေးကြီးတဲ့ လက်မှတ်တန်းတွေဟာ ထင်သလောက်မရောင်းရပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီမှာတင် အာဆင်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့အတွက် ဒီထက်ပိုကြီးတဲ့ ကွင်းတစ်ခုလိုလာပြီဆိုတဲ့ အချက်ကို တွေးမိလာပါတော့တယ်။ Read more... Comments (1)
၃ မိနစ်အတွင်း ၂ ဂိုးသွင်းပြီး ၂၀၁၄ ကို နိုင်ပွဲဖြင့် နှုတ်ဆက်လိုက်သည့် အာဆင်နယ်	AG2K	( ၀က်စ်ဟမ်း ၁ - ၂ အာဆင်နယ် ပွဲပြီးသုံးသပ်ချက်)၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက် ပရီးမီးယားလိဂ်၏ နောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ပွဲများဖြစ်သည့် ပွဲစဉ် (၁၉) ကို ယနေ့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားခဲ့ကြရာ ၀က်စ်ဟမ်းနှင့် အာဆင်နယ်တို့၏ ပွဲစဉ်တွင် အာဆင်နယ်အသင်းက အိမ်ရှင်ဝက်စ်ဟမ်းကို နှစ်ဂိုး တစ်ဂိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ အာဆင်နယ်အသင်းအတွက် ရှက်ဇနီ၊ ဒီဘူချီ၊ မာတီဆက်ကာ၊ ကိုစီရယ်နီ၊ မွန်ရီယယ်၊ ဖလာမီနီ၊ ကိုကွီလင်၊ ကာဇိုလာ၊ ဆန်းချက်ဇ်၊ ချိန်ဘာလိန်နှင့် ၀ဲလ်ဘက်တို့ ပွဲထွက်ခဲ့သည်။ Read more... Add new comment
« Start Prev 1234567 8910 Next End »	Page 1 of 92	Copyright © 2016 Arsenal Myanmar | All of Arsenal fans from Myanmar.. All Rights Reserved. Originated by Thatoe.